हुन त विश्व प्रसिद्ध अग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियरले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए– 'नाममा के राखेको छ र ?' उनले भनेका थिए- 'यदि गुलाफलाई कुनै अर्कै नामले पुकारे पनि त्यसले जुन बासना दिन्छ, त्यो उत्तिकै महत्त्वको र उत्तिकै गुणशील हुन्छ । त्यसको नाम गुलाफ नभएर के भो त ?'
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छोटकरीमा नेकपाकै नाम अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोष्ठभित्र (नेकपा) राख्न सत्ताधारी दल किन उद्यत् भयो र त्यसैमा हठ लिएर बलजफती निर्वाचन आयोगबाट पार्टी दर्ता भएको घोषणा गरायो ? यसमा सञ्चारमाध्यम र आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनको शासन मान्ने दाबी गर्ने दलहरू किन चुपचाप छन् ?
सत्तामा बसेर हालीमुहाली चलाएका केही ठेकेदारहरूको मात्र होइन यो देश । तीन करोड नेपाली जनता त्यसमा पनि बहुसंख्यक शोषित पीडित जनताको देश हो यो । उनीहरूको सचेतना, संगठित सक्रियता र समर्पण विना यो देश केही ठेकदारहरूको भरमा बन्दैन र जनतन्त्र पनि समृद्ध हुँदैन ।